Sina automatique chain chain rafitra miova zoro fitaratra mihenjana milina orinasa mpanamboatra sy mpanamboatra | Zhengxing mekanika
milina fantsom-pifandraisana mandeha ho azy miovaova amin'ny masinina manify
Ity milina ity dia afaka manao polishing fisaka mahazatra, izy io koa dia afaka manamboatra mari-pahaizana 0-45. Mampiasa ny fifehezana PLC sy ny rafitra fikirakira tontonana ity milina ity. Ny milina dia afaka mihazakazaka amin'ny maody mandeha ho azy sy ny maody amin'ny tanana. Ny motera 4-6 anoloana dia afaka manitsy ny zoro manomboka amin'ny diplaoma 0 ka hatramin'ny 45 degre ho an'ny famolahana ny sisin'ny farany ambany sy ny morony.
Rafitra fihodinan'ny zoro miovaova
Ity milina ity dia manao polishing moraly mahazatra sy morer
a) Rafitra fanaraha-maso:
Mampiasa ny fifehezana PLC sy ny rafitra fikirakira tontonana ity milina ity. Ny milina dia afaka mihazakazaka amin'ny maody mandeha ho azy sy ny maody amin'ny tanana.
b) Faritra fanovana zoro miovaova
Ny kodiarana dimy farany ambany dia afaka manitsy ny zoro manomboka amin'ny 0 degree hatramin'ny 45 degree. Ny rafitra fihodinana dia mampiasa rafitra tohana kambana roa, ny andry môtô dia tohanana amin'ny faran'ny roa izay manome fifandanjana tena tsara ary mitazona ny marina mitovy mandritra ny fihodinana.
c) Rafitry ny rano mangatsiaka.
Ny fitoeran-kodiaran'ny kodiarana frontal 5 dia mampiasa rafitra fihodinana, izay afaka mifanaraka amin'ny kodiarana arakaraka ny zoro.
d) Reny ambanin'ny tany sy ny endriny:
Vita amin'ny vy namboarina taorian'ny fitsaboana hafanana mba hiantohana ny fitoniana sy ny fahamendrehana.
rafitry ny fandefasana rojom-baravarana, pads mihetsika manaraka ny andry, ny rubber dia raikitra amin'ny pad nylon.
Ny milina dia manana fanohanana afovoany nohamafisina. Ity dia manana andraikitra lehibe hanarenana ny fahamendrehan'ny mpampita raha sanatria ka misy fihoaram-pefy mandritra ny fotoana maharitra.
f) Rihana ambany, mpanohana, mpampita
Vita amin'ny vy natsangana mba hiantohana ny fitoniana sy ny filaminana
g) Ity motera ity dia mampiasa motera CDQC avo lenta
h) Hetsiky ny lalamby anoloana:
Ny motera, afaka mihetsika mifanitsy izy mba hifanaraka amin'ny hatevin'ny fitaratra samy hafa.
i) Mpampita entana mampidina / miala
Fehikibo fotoana, ny fehikibo fametahana dia afaka manitsy ny haavony hahazoana fanesorana vera samihafa.
j) Ny rindrambaiko fanohanana fitaratra dia mampiasa fantsom-panafody Aluminium, miaraka amina plastika.
k) Fanamboarana hafainganam-pandeha:
amin'ny alàlan'ny regulator haingana, amin'ny tanana.
l) Amperometre metatra:
zahao ny tsindry kodiarana.
m) Ny spindles ho an'ny arris dia mandray ny firafitry ny takelaka fitarihana, izay tsy misy fihoaram-pefy amin'ny fiasana.
n) Rafitra rano
Ny rano dia mivezivezy ao amin'ny masinina sy ny fitoeran-drano tsy misy rano. Ny toeram-pivoahana fiara mifono vy dia mifandray amin'ny fantsona tsy misy fantsona iray izay mora be amin'ny fametrahana azy. (Pic.IV). Ny fantson'ny rano toradroa ho an'ny fidirana rano dia mifamatotra amin'ny nozongo kodiarana tsirairay.
Ny hatevin'ny vera:
Fanesorana azy ireo:
Min. haben'ny vera:
Dimension ankapobeny (LWH):
Previous: 15 motera mandeha ho azy baolina mandeha maotera miova miova fitaratra fitaratra milina
Masinina 45 Degre Glass Edge
Masinina mitazona fitaratra
Glass Multi Function Edging Ary Mitering Machine
Motera 11 mandeha ho azy baolina mandeha miova miovaova ...
10 motera mandeha ho azy baolina maotera adidy mavesatra ...
Motera 15 mandeha ho azy baolina mandeha miova miovaova ...